Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Aeromexico waxay fayl -garaysaa Qorshaha Dib -u -habaynta Cutubka 11aad
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Mexico • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Diiwaangelinta Qorshuhu waa fure muhiim u ah waddada Aeroméxico si ay uga soo baxdo hannaankeeda Cutubka 11aad, waxayna Shirkaddu rajaynaysaa inay sii waddo la -hawlgalka daneeyayaasheeda si loo dhammaystiro Qorshaha si is -waafaqsan.
Aeromexico waxay fayl garaysaa Qorshaha Wadajirka ah ee Dib -u -habaynta, bayaanka shaacinta ee Qorshaha iyo mooshin lagu ansixinayo habraacyada raadinta ee la xiriira Qorshaha.
Aeromexico waxay sii wadi doontaa raacitaanka, si habsami leh, dib -u -habaynteeda maaliyadeed ee ikhtiyaariga ah ilaa Cutubka 11.
Aeromexico waxay sii wadi doontaa xoojinta mowqifkeeda maaliyadeed iyo xisaabinteeda waxayna ilaalin doontaa oo ilaalin doontaa howlaheeda iyo hantideeda.
Grupo Aeroméxico, SAB de CV waxay ku wargelisay inay soo gudbisay, oo ay weheliso la -hawlgalayaasheeda kuwaas oo ah kuwa deyn -qaatayaasha ah ee ku jira Cutubka 11 geedi -socodka dib -u -habaynta maaliyadeed ee ikhtiyaariga ah, Qorshaha Wadajirka ah ee Dib -u -habeynta, bayaan shaaca ka qaadis ah oo la xiriira Qorshaha iyo mooshin lagu ansixinayo habraacyada raadinta si xushmad leh ee Qorshaha.
Aeroméxico damacsan yahay inuu ku soo gudbiyo hal ama in ka badan Qorshaha jadwalka ku qoran Qorshaha ama sida kale ee Maxkamaddu amartay. Dhageysi lagu ansixinayo Bayaanka Daahfurka ayaa la filayaa in la qabto Oktoobar 21keeda, 2021. Marka la galo amarka oggolaanshaha Qoraalka Daah -furka, Shirkaddu waxay damacsan tahay inay bilowdo hawsha si codsi loogu codsado Qorshaha.
Aeroméxico waxay sii wadi doontaa raacitaanka, si habsami leh, dib -u -habaynteeda maaliyadeed ee ikhtiyaariga ah ilaa Cutubka 11, iyadoo sii wadaysa inay shaqayso oo u fidiso adeegyo macaamiisheeda isla markaana qandaraas ka siiso alaab -qeybiyeyaasha badeecadaha iyo adeegyada looga baahan yahay hawlgallada.
Aeroméxico waxay sii wadi doontaa inay xoojiso mowqifkeeda maaliyadeed iyo dheelitirka, ilaaliso oo ilaaliso howlaheeda iyo hantideeda, iyo hirgelinta isbadallada lagama maarmaanka u ah yareynta saameynta COVID-19.
Aerovías de México, SA de CV oo u shaqaysa Aeroméxico, waa diyaarad sidda calanka Mexico, oo fadhigeedu yahay Mexico City. Waxay u shaqaysaa adeegyo jadwal u ah in ka badan 90 goobood oo Mexico ah; Waqooyiga, Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika; Kariibiyaanka, Yurub iyo Aasiya.